पिल्लर हुन् व्यवसायी - Karobar National Economic Daily
पिल्लर हुन् व्यवसायी
query_builderFebruary 12, 2017 12:12 PM supervisor_accountभगवान खनाल/राधिका ढकाल visibility1042
काठमाडौं । दश वर्षअघिसम्म दश करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै कारोबार गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू अहिले वार्षिक ३०–४० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने भएकोमा गर्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
ती मध्येका केहीले त वार्षिक ५–७ अर्ब रुपैयाँकै कारोबार गर्छन् । कम्तिमा पनि ५०–६० कम्पनीहरू विदेशमा समेत काम गर्न सक्षम रहेको निर्माण व्यवसायी दाबी गर्छन् ।
व्यवसायले पिकअप लिएसँगै काम हातबाट प्रविधितर्फ उन्मुख भएको छ भने अहिले नेपालीसँग अनुमानित ३ सय अर्ब रुपैयाँका यन्त्रहरू छन् । १२ हजार थान विभिन्न विकासे उपकरण भएको अनुमान गर्छन् उनीहरू ।
व्यवसायीले स्वदेशी बजेटमा पहिलोपटक ठूलो बजेटमा पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी पाएका छन् । धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा र गल्छी–रसुवा–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक निर्माणको जिम्मा लामा, स्वच्छन्द, तुन्दी, रसुवा, शर्मा, कालिका र अनक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजा देशभर निर्माण क्षेत्रमा ११ लाखले रोजगार पाएको अनुमान गर्छन् । यस्तै, विदेशीलाई काम दिन पनि सकिने विदेशमा काम गर्न जान पनि सकिने बताउँछन् निर्माण व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव विष्णु बुढाथोकी ।
“हामीले तिर्ने कर पनि उल्लेख्य छ,” बुढाथोकीले भने । कोटेश्वर–भक्तपुर–सूर्यविनायकसम्मको सडक नेपाली व्यवसायीले सम्पन्न गरे । स्वच्छन्द निर्माण सेवाका अध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने जापानको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालीले काम गरेको क्षणलाई गर्व गर्नुपर्ने बताउँदै पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक तथा उपकरण भएमा जस्तोसुकै पूर्वाधार पनि बनाउन सक्ने ल्याकत राख्ने स्पष्ट पार्छन् ।
“मलाई कसैले चन्द्रमा जाने बाटोमा होटल बनाउनु प-यो भने पनि बनाउनु सक्छु,” उनी भन्छन्, “अवसर पाएमा क्षमता आफैं बन्छ । तर, यसको लागि खर्च व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा ठूलो हो ।”
नेपालका शर्मा, लामाजस्ता निर्माण व्यवसायीले मेलम्ची जाने बाटो निर्माणको काम विदेशी ठेकेदारसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा (जेभी)मा गुणस्तरीय रूपमा गरे । शर्मा एण्ड कम्पनीले माल्दिभ्समा, तुन्दीले भुटानमा, स्वच्छन्दले भारत र दुबईमा, कालिका कन्स्ट्रक्सनले अमेरिकामा समेत निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।
तर, उनीहरूको यो क्षमतालाई अन्तिम मान्नु ठूलो भूल हुनेछ । विदेशको तुलनामा व्यवसायी निकै कमजोर भए पनि नेपालको लगानीअनुसार व्यवसायीले पनि केही पहलकदमी लिइरहेको भने पक्कै हो ।
‘क’ वर्गका २३१, ‘ख’ वर्ग २६८, ‘ग’ वर्गका १,१३८ र ‘घ’ वर्गका १० हजार ७ सय ४० व्यवसायी छन् । तल्लो वर्गका व्यवसायीको संख्या अधिक रहेकोले उनीहरूसँग खासै क्षमता, प्रविधि, उपकरण र प्राविधिक छैनन् । “यिनकै कारण निर्माण व्यवसायी महासंघलाई काममा ढिलासुस्तीलगायतका आरोप लाग्ने गरे पनि कहिलै सच्चिँदैनन्,” महासंघका एक पदाधिकारीले दुखेसो गर्दै भने ।
स्वदेशी व्यवसायीले काम गर्छन् भनेर नै काम दिइएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक दयाकान्त झा बताउँछन् । भूकम्प आएकै वर्ष भारतले लगाएको नमिठो नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तराई र हिमाल जोड्ने गरी बनाउन लागिएको वैकल्पिक सडकको काम स्वेदेशी लगानीमै स्वदेशी व्यवसायीले गर्नेमा नागरिक खुसी छन् ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष जीपछिरिङ लामा व्यवसायीलाई मात्रै आरोप लगाउन नहुने बताउँछन् । लामिछाने पनि उपभोक्ता, प्राविधिक, व्यवसायी र कर्मचारी चारवटै पक्षको गुणदोषको आधारमा समयमा काम सम्पन्न हुने नहुने, गुणस्तरीय काम हुने नहुनेलगायतले प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।
साढे दुई दशकको जवानी पार गरेको नेपाली निर्माण व्यवसायीको संगठित संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र यसका सदस्यले निकै आरोहअवरोह पार गर्नुपरेको बुढाथोकीले बताए । नीति नियम निर्माण, परिमार्जनसम्म महासंघले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
युरोप, अमेरिका, चीन, मलेसियालाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायले सहयोग गरेको त्यहाँको इतिहासले बताउँछ । इस्ट इण्डिया कम्पनीले भारतको विकास गरिदिएको हो ।
अस्पताल, हाउजिङ, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायीहरू राजनीतिमा पनि उत्तिकै हावी छन् । यसलाई विडम्बना मान्ने कि अवसर ? उत्तर खोज्नु शायद हतारो नै होला । व्यवसायीले स्वेदशमा लगानी गर्दा रोजगारी सिर्जना भएको बताउँदै व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारी भन्छन्, “अहिलेको तुलनामा गुणौं रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।”
श्रममुलक जनशक्तिको पलायन र बसाइँसराइले विदेशी जनशक्ति पनि कामदारको रूपमा ल्याउनु परेको छ । महासंघका महासचिव रामशरण देउजा ३० प्रतिशत विदेशी नेपालमा कार्यरत रहेको बताउँछन् । भारतीय २० प्रतिशत र बंगलादेशका, चिनियाँ र भुटानीहरू निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
संघीय संरचनामा नेपालले विकासका योजना बनाउनु आवश्यक भएसँगै व्यवसायीले पनि ती काम पूरा गर्न चाहिने जनशक्तिको आँकलनसहित योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । खासगरी विदेशमा रहेका श्रममुलकदेखि प्राविधिक जनशक्तिलाई भित्राउने यो स्वर्णिम अवसर हो ।
व्यवसायी भर्सेज राजनीतिकर्मी
व्यवसायी बनेर राजनीतिमा छिरेकाहरू मन्त्रालय हाँक्ने तहमा समेत पुगेका छन् । पञ्चायतकालदेखि नै निर्माण व्यवसायी मन्त्रालय हाँक्ने सम्मको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । अहिले पनि व्यवस्थापिका–संसदमा कम्तिमा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी व्यवसायी माननीय छन् ।
बहाुदरसिंह लामा, रेशम लामा, विक्रम पाण्डे, जनार्दन ढकाल, जीपछिरिङ लामा, जयराम लाछिमाने, लंकबहादुर के.सी, विष्णु शर्मा, यक्षध्वज कार्कीलगायत व्यवसायी ‘एजवेल एज पोलिटिसिएन’ हुन् । उनीहरूको यस्तो सहभागिताले देश विकासको नीति र गतिलाई कता लैजाने हो अहिलै अनुमान गर्नु हतारो पनि होला कि ?
लिडिङ फ्रम वुमन
अन्य पेशा व्यवसायभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको निर्माण व्यवसायमा महिलाको संख्या बृद्धि हुनु सहभागितात्मक विकासको आफैंमा गतिलो नमूना हो । व्यवसाय दर्ताको हिसाबले ३४५ जना भएपनि महिलाले नै व्यवसाय हाँक्ने चाहिँ खासै धेरै छैनन् ।
तर दिनप्रतिदिन महिला व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको निर्माण व्यवसायी महासंघको महिला उद्यमी संघका संयोजक एवम् ज्ञानकुञ्च निर्माण सेवाकी अध्यक्ष रमिला लामाले बताइन् ।
“महिला व्यवसायीले पुरुषले भन्दा गुणस्तरीय काम गरेको अनुभव गरेकी छु,” लामाले भनिन्, “पुरुष व्यवसायीलाई जे चुनौती छ, त्यही महिलालाई पनि छ ।” कामदार पुरुष, अधिकांश व्यवसायी पुरुषै हरेको सन्दर्भमा महिला व्यवसायी थपिएसँग महिला मजदुरको पनि संख्या बृद्धि हुदै गएको छ । विदेशमा पनि महिला व्यवसायी रहेको बताइन्छ ।